नियमित साइकल चलाउने बानीले कोरोनाबाट बच्न सहयोग गर्छ – विशेषज्ञ डा. केसी
गोपी अधिकारी बिहानै वीरेन्द्रनगरका गल्लीमा, कच्ची सडकमा, हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्छन् । उनी पहिले पनि यसरी नै यात्रा गर्थे तर अहिले भने फरक यति हो उनी साइकलमा यात्रा गर्दै आइरहेका छन् । हरेक दिन बिहान साइकल यात्रा गर्दा स्वास्थ्य पनि बलियो हुन र त्यसले मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि कायम गराउने उनको अनुभव छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य गोविन्द केसीको विहानी पनि त्यसरी नै बित्छ । पानी परेको दिन भने उनी बाहिर निस्कदैनन् । पानी नपरेको बिहान उनको यात्रा साइकलमा नै हुन्छ । उनीसँगै पत्रकार तिलक पौडेल पनि साइकलमा नै यात्रा गर्छन् । साइकल यात्रा गर्दा धेरै मनोरञ्जन प्राप्त हुने उनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालको पनि बिहानभति साइकल यात्रा नै हुन्छ । साइकल चलाउन थालेपछि उनमा स्फूर्ति आएको लोकान्तरसँग बताउँछन् । साइकल यात्रामा निस्कने अधिकांश सरकारी कर्मचारी र पत्रकार छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्याय साइकलमै दैनिक २० किलोमिटर जतिको यात्रा गर्ने गरेको बताउँछन् । साइकल यात्रा गर्दा र पैदल हिँडदाको अनुभुति बेग्लै हुने उनको ठम्याइ छ ।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सडक साँघुरा छन् । ती सडकमा सवारी साधनको चाप दैनिक रुपमा बढदै गएको छ । यसले गर्दा यहाँ वायुप्रदुषण बढ्ने पक्का छ भन्छन्, क्लिन सुर्खेत ग्रीन सुर्खेतका अभियन्ता एवम बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी ।
बिहानमात्र नभएर दिनभरि नै यात्रा गर्दा साइकल यात्रा गर्नुपर्ने सुझाव डा. केसीको छ । ‘सानो दूरीको यात्रा गर्न पेट्रोलबाट धेरै प्रदुषण बढ्ने गरेको छ । इलेक्ट्रिक कारमा हुने लिथियम ब्याट्री बनाउँदा आवश्यक पर्ने खानीको उत्खननले धेरै देशको नदी सुकेका छन् । उदाहरणका लागि अर्जेन्टिनाको नदी सुकेको छ खासगरी अफ्रिकन देशमा यस्ता समस्या देखिएका छन् । इलेक्ट्रिक कारले पनि वातावरणलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘पर्यावरणीय हिसाबमा असाध्यै राम्रो, अन्य सवारी साधनभन्दा सबैभन्दा सस्तो साइकल नै छ । निम्न आयश्रोत भएको व्यक्तिकोलागि यो उपयुक्त छ ।’
दैनिक रुपमा साइकल चलाउनेहरुका लागि रोगसँग लड्न बल पुर्याउने उनको भनाइ छ । ‘दीर्घ रोग, दमरोगी, सुगर, हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर, तौल धेरै हुनेलगायतका धेरै रोगका लागि औषधी भन्दा साइक्लिङ राम्रो हो,’ उनले भने, ‘दैनिक रुपमा कम्तिमा पाँच किलोमिटर साइकल स्याँ स्याँ नभएर चलाउन सकियो भने फोक्सोमा त्यति धेरै समस्या आउँदैन । फोक्सोमा क्षमता बढि हुने हुँदा कोरोनाबाट जोगाउन सक्छ । अर्थात कोरोनाको असर कमगर्न र जोगिन साइकल चलाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।’
उनले साइकल मनोरञ्जनको साधन भएको र खेलका लागि पनि उत्कृष्ट रहेको बताए । ‘साइकल म चलाउँछु भन्दा पनि साइकललाई हरेक विद्यार्थीको स्कुले जीवनदेखि नै साइकल चलाऔं भन्ने अभियान सुरु गर्नुपर्ने देखेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘वीरेन्द्रनगरमा बिहान ९ देखि १० बजे र बेलुका ४ देखि ५ बजे वीरेन्द्रनगरले एम्बुलेन्स, तथा अत्यावश्यक वाहन बाहेक सञ्चालनमा रोक लगाउन आवश्यक छ । यसले साइकलक प्रयोगमा सबैको ध्यान जाने र विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुसमेतको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्ने मैले देखेको छु ।’